Izinkantolo zibhekelela ukuphepha kwengane oqhekekweni lomndeni - Bayede News
Isitatimende esifungelwe sibeka kabi iMeya yaseNkandla
Ezimweni lapho kuthinteka khona ilungelo lokugcina ingane, miningi imibuzo evelayo. Umuntu osuke esezinhlelweni zesahlukaniso somshado uyafuna ukwazi ukuthi ngabe ingane izohlala naye uma kungenjalo ngabe uzokwazi ukwenza izinqumo ezibalulekile ngendlela ingane okufanele ikhuliswe ngayo.
Ngakolunye uhlangothi uma uyisihlobo esiseduze sengane noma umngani womndeni wale ngane ongayizali ungazibuza futhi ukuthi ngabe ukuyigcina ngaphansi kwakho khona yinto engenzeka yini?
Kodwa impendulo kulokhu isezimpandeni zesimo umuntu asuke esebhekene naso kanti abazali noma abanye abangenaso isipiliyoni ngezindaba ezithinta ukugcinwa kwengane nokusebenza komthetho okubakhathaza kakhulu ukuthi sithathwa kanjani isinqumo kulesi simo.
Isehlukaniso nesinqumo sokugcinwa kwengane
Uma ungumzali usucabanga ukuhlukanisa noma usukulolo hlelo kufanele ukuthi uyazibuza ukuthi indaba yokugcinwa kwengane nokuvakasha isonjululwa kanjani esimweni esifana nesakho. Ngokujwayelekile, njengakuzo zonke izimo zesehlukaniso okuhlanganisa ukwehlukaniswa kwempahla nemali, ukondliwa kwengane nobuganene nanye, ukugcinwa kwengane nokuvakasha kwayo kunganqunywa ngesivumelwano phakathi kwabahlukanisayo okujwayele ukuba kwenziwe ngosizo lwabameli nabaxazululi noma inkantolo.
Kujwayeleke ukuthi esahlukanisweni lokhu kuxazululwe ngendlela eyodwa kwezimbili eziphambili okuwukuthi:
Abazali bafinyelele esivumelwaneni kulandela ukuxoxisana (informal settlement negotiations) okujwayeleke ukuthi kwenzeke ngosizo lwabameli okanye kutholwe isixazululo sangaphandle kwenkantolo (mediation/collaborative law) nakhona okuye kulekelele ummeli.
Inkantolo ingasithatha isinqumo okujwayeleke ukuthi kube umehluleli wenkantolo yomndeni.
Abazali abangashadile nezinqumo zokugcinwa kwengane
Uma abazali bengane bengashadile imithetho eminingi yohulumeni ithi unina unikwa ilungelo lokugcina ingane ngaphandle uma uyise kukhona izinyathelo azithathayo ukuze ayithole. Ngokujwayelekile uyise wengane ongashadile nonina wayo akavamile ukuthola leli lungelo uma unina wengane engumuntu okahle kodwa kukhona angakwenza ukuthola ilungelo thizeni lokuyigcina nelokuvakasha.
Umbango wabazali abangashadile wokugcinwa kwengane, izindlela zokuthathwa kwesinqumo ngozoyigcina ziyefana nezabadivosayo okuwukuthi umbango ungaxazululwa ngesivumelwano phakathi kwabazali noma ngesinqumo sikamehluleli wenkantolo yomndeni.
Kungefani nabahlukanisayo, abazali abangashadile bona ngeke babe nesidingo sokudlula ezimweni okungena kuzo abahlukanisayo njengokwehlukaniswa kwempahla nokukhokhelwa kobeganene naye ngakho-ke indlela yokufinyelela esinqumweni igxila ekugcinweni kwengane.
Ngalesi sizathu isinqumo sokugcinwa kwengane nokuvakasha singenziwa ngendlela elula kubazali abangashadile.
Uma abazali bengane abangashadile behluleka ukufinyelela esixazululweni ngaphandle kwenkantolo, udaba lungadlulela enkantolo yomndeni lapho ibheka bese ihlonza ozoba ngumgcini omkhulu. Lokhu ikwenza ngokubheka okufanele nokulungele ingane.
Isinqumo sokugcina ingane ongayizali
Kwezinye izimo abazali okungebona abegazi enganeni bangafisa ukuyigcina. Laba kungaba ugogo wayo, uninalume, ubabekazi noma abangani bomndeni abaseduze.
Abanye ohulumeni lokhu bakubiza ngenon-parental, ithird party custody. Kokunye lokhu kuthathwa njengokuba umbheki wengane hhayi umgcini wayo.
Noma ngabe kusetshenziswa liphi igama, ohulumeni abaningi banezindlela okufanele zilandelwe abantu abafuna ukugcina izingane abangazizali. Kujwayeleke ukuba kuqale ngesikhathi umuntu ofuna lokhu efaka umqingo obizwa ngenon-parental custody petition enkantolo. La maphepha aveza ubudlelwane bakhe nengane, isimo sabazali (sebashona, bayaphila noma abaziwa ukuthi bakuphi) nesizathu esenza afune ukunikwa ingane nokuthi kungani kufanele anikwe.
Ngokujwayelekile ikhophi yala maphepha kufanele athunyelelwe kubazali bengane uma besaphila futhi kwaziwa ukuthi bakuphi.
Ukuthola ulwazi oluphelele ngokuthi sithathwa kanjani isinqumo sokugcina ingane kuhle ukuxhuma nommeli ongachaza kahle imithetho futhi akwazi nokumela lokhu okufunayo.
nguSabelo Mbatha Sep 11, 2020